Politika famerenam-bola - Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co., Ltd.
Momba ny politika fiverenana 30 andro:
Raha mila mahazo ny fampahalalana miverina ianao dia mifandraisa aminay ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoana.
Ho an'ny fangatahana fiverenana dia vakio ity fampahalalana manaraka ity:
1. Raha tsy azo sokafana ny mpanonta, na simba rehefa aterina, na izahay ny entana / vokatra tsy mifanaraka aminay, dia azonao atao ny mandefa fangatahana fiverenana / famerenam-bola ao anatin'ny 30 andro.
2.Momba ny vokatra mpanonta 3D anay, manome antoka 1 taona izahay ho an'ny ampahany lehibe rehetra ao anatin'izany ny motherboard, motera, fampisehoana efijery ary fandriana mafana. Ny fanomezana, kojakoja ary kojakoja marefo dia tsy saron'ny fiantohana.
Azafady mba mifandraisa aloha amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika raha misy fangatahana fiverenana simba.
Raha tsy olan'ny mpanonta izany dia tsy handray ny vidin'ny fandefasana izahay. Ary raha mila miverina any Shina ny masinina, tsy hitondra ny sarany amin'ny hetra mety hitranga ihany koa izahay.
3. Afa-tsy ny lozisialy, raha tsy tianao ny vokatra, mandà mivantana ny fonosana, na miverina noho ny antony manokana aorian'ny fandefasana (tsy maintsy amin'ny fanjakana vaovao), dia mety mila miatrika ny sarany mazava nalefan'ny mpivarotra sy ny vidin'ny famerenana fonosana.
Alohan'ny hamerenana ny vokatra dia mba omeo anay ny sarin'ireo vokatra.
Raha vantany vao ekena ny fangatahana fiverenana dia mety maharitra 25 andro vao mahazo ny vokatra isika ary manamboatra ny famerenam-bola aorian'ny fandefasanao ny vokatra hiverina aminay.
Inona no TronHoo3D Do
Raha manana olana amin'ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny Facebook na amin'ny alàlan'ny mailaka, TronHoo3D dia hamantatra ny olana ary hamaly anao faran'izay haingana.
Hanampy anao izahay hamaha ny olana amin'ny alàlan'ny fitarihana anao hanavao ny fitaovana, hanomezana fanohanana teknika na hanolo ireo faritra ilaina.
Ny fiantohana ny masinina dia mijanona tsy miova.
Fitaovana: motherboard, kitapo, kitapom-pandriana mafana, fampisehoana, tabilao PCB, ankafizo ny Warranty 30 andro (Warranty 30 andro mahazatra)
Fanamarihana: sticker amin'ny farafara fandriana mafana, fonosana, fandriana andriamby ary fanjifana hafa dia tsy saron'ny fiantohana raha tsy vokatry ny tsy fahombiazan'ny masinina.
* Ny vanim-potoana fiantohana dia mety miova arakaraka ny lalàna sy lalàna eo an-toerana.
Ny fampiasana mombamomba ny fifandraisana manokana
Amin'ny alàlan'ny fahazoana serivisy aorian'ny varotra amin'ity politika ity dia manome alalana anao TronHoo hitahiry ny mombamomba anao ao anatin'izany ny anarana, nomeraon-telefaona, adiresy fandefasana ary adiresy mailaka. Hiaro ny fiarovana ny fampahalalana izahay.
TronHoo dia manome antoka fa ny fangatahana famerenam-bola, fanoloana ary fanamboarana fiantohana dia azo angatahina raha toa ka manaraka ireto fepetra ireto:
Ny vidin'ny fandefasana dia tsy maintsy saron'ny mpividy amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
● Miverina ny vokatra na inona na inona antony hafa ankoatry ny kilema voaporofo.
● Fiverenana tsy nahy an'ny mpividy.
● Miverina entana manokana.
● Ireo entana naverina dia nilaza fa manana kilema saingy hitan'ny TronHoo QC fa ao anatin'ny toe-javatra iasana.
● Miverina ireo entana tsy mandeha amin'ny fandefasana entana iraisam-pirenena.
● Vola mifandraika amin'ny fiverenana tsy nahazoana alalana (izay fiverenana natao ivelan'ny fizotry ny fiantohana nekena).
Inona no hatao alohan'ny fahazoana serivisy aorian'ny fivarotana
Ny mpividy dia tsy maintsy manome porofo mazava momba ny fividianana.
TronHoo dia tsy maintsy manao an-tsoratra izay mitranga rehefa manakorontana ny vokatra ny mpividy.
Ilaina ny laharana serial sy / na porofo hita maso mampiseho ny lesoka.
Mety ilaina ny mamerina entana iray hijerena ny kalitao.
Porofon'ny fividianana marina:
Laharana famandrihana avy amin'ny fividianana an-tserasera natao tamin'ny alàlan'ny magazay TronHoo Ofisialy